एमाले सुनसरी अध्यक्षका लागि यी हुन् तीन आकांक्षी
नेकपा एमालेले पुस २३ गते शुक्रबार देशभर एकैसाथ जिल्ला अधिवेशन गर्दैछ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भर्चुअल माध्यमबाट एकैसाथ उद्घाटन गर्ने जिल्ला अधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ । नयाँ नेतृत्व चयनसहितको जिल्ला अधिवेशन भएका कारण एमालेका नेता कार्यकर्तामा यतिखेर चुनावी सरगर्मी निकै बढेको छ ।सुनसरी एमालेमा पनि अधिवेशनबाट नेतृत्व लिन नेताहरूले सक्रियता बढाएका छन् । नेताहरूले सर्वसम्मत नेतृत्व चयनको गृहकार्य अघि बढाइरहँदा जिल्ला अध्यक्षका लागि भने तीन नेताहरूले आकाङ्क्षा राखेका छन् । अहिले देखिएक
सिमकोटमा अध्यक्ष उम्मेदवार बन्न कांग्रेसका ६ आकांक्षी
सिमकोट – हुम्लाको सदरमुकाम रहेको सिमकोट गाउँपालिकामा नेपाली कांग्रेसबाट आउँदो चुनावमा अध्यक्षका लागि ६ जना आकांक्षी देखिका छन् । कांग्रेस गाउँपालिका कार्यसमितिको बैठकमा ६ नेताले आफू अध्यक्षको उम्मेदवार बन्न चाहेको बताएका हुन् । नेपाली कांग्रेस सिमकोट गाउँपालिका कमिटीका सभापति धर्मराज रोकायाका अनुसार कमिटीका उपसभापतिद्धय कैलाश भण्डारी र बसन्त रोकाया, महाधिवेशन प्रतिनिधिद्धय सुशीला रोकाया र गणेश […]
बन्दिपुर कांग्रेसमा कडा प्रतिस्पर्धा हुने, यी हुन् अध्यक्षका आकांक्षी
तनहुँ, ३ फागुन । सरकारले आगामी बैशाख ३० गते स्थानीय चुनाबको मिति घोषणा गरेको छ। चुनाव नजिकिदै गर्दा तनहँुको बन्दिपुर गाउँपालिकामा राजनीतिक चहलपहल सुरु भएको छ । विभिन्न दलहरु जनताको घर–घरमा पुगेर टोल समिति गठन देखि आफ्नो पार्टीको एजेण्डा बाड्न थालेका छन् । बन्दिपुर काङ्ग्रेस गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदको उमेदवारका दाबी गर्नेहरु करिब १२ जना देखिएका […]
उदयपुर, २३ पुस : नेपाल कम्युनिष्ट पाटी (एमाले) उदयपुरको आठौं जिल्ला अधिवेशन शुक्रबारदेखि सदरमुकाम गाईघाटमा सुरु भएको छ । अधिवेशनबाट सर्बसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने प्रयास भइरहेको छ । आठौं जिल्ला अधिवेशनमा अध्यक्षमा दाबी गर्दै चार जनाले उम्मेदवारी घोषणा गरेको छ । गुटबन्दी अन्त्य गर्नका लागि सर्बसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने भन्दै पार्टी नेतृत्व लागेको भए पनि […]
२३ पुस, बुटवल । नेकपा (एमाले) रुपन्देहीको नवौं जिल्ला अधिवेशनमा नेतृत्वका लागि आधा दर्जन बढी नेता आकांक्षी रहेका छन् । एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, सचिव छविलाल विश्वकर्मा, स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसाल, खिमलाल भट्टराई लगायतका नेताहरुको गृह जिल्ला भएकाले आकांक्षीहरु आ–आफ्नो पक्षमा माहोल बनाउन लबिङ गरिरहेका छन् । जिल्ला अध्यक्षका लागि हालका उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम घिमिरे, […]
सुनसरी एमालेमा को को छन् अध्यक्षका आकांक्षी ?
प्रकाश तिम्सिनानेकपा (एमाले) सुनसरीको जिल्ला अधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्वका लागि चारजना आकांक्षी देखिएका छन् । अध्यक्षमा दाबी गर्नेमा पूर्वसंविधानसभा सदस्य रेवती रमण भण्डारी, जिल्ला अध्यक्ष खेमराज पोखरेल र इटहरी उपमहानगरपालिका प्रमुख द्वारिकलाल चौधरी छन् । प्रदेश सदस्य तथा इटहरी खानेपानी संस्थाका अध्यक्ष रामप्रसाद चौलागाईँले पनि अध्यक्षमा दाबी गरेका छन् । नेतृत्व चयनका लागि सहमतिको बाटो खोजिरहँदा आकांक्षी बढेपछि थप दबाब परेको छ । नेतृत्व लिन तयार रहेकामध्ये चौधरी, पोखरेल, भण्डारी जिल्ल
एमाले सुनसरी अध्यक्षका लागि तीन आकांक्षी
सुनसरी– नेकपा एमालेले शुक्रबार देशभर एकैसाथ जिल्ला अधिवेशन गर्दैछ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भर्चुअल माध्यमबाट एकैसाथ उद्घाटन गर्ने जिल्ला अधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ । नयाँ नेतृत्व चयनसहितको जिल्ला अधिवेशन भएका कारण एमालेका नेता कार्यकर्तामा यतिखेर चुनावी सरगर्मी निकै बढेको छ । सुनसरी एमालेमा पनि अधिवेशनबाट नेतृत्व लिन नेताहरूले सक्रियता बढाएका छन् । […]
सुनसरी । नेकपा एमालेले पुस २३ गते शुक्रबार देशभर एकैसाथ जिल्ला अधिवेशन गर्दैछ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भर्चुअल माध्यमबाट एकैसाथ उद्घाटन गर्ने जिल्ला अधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ । नयाँ नेतृत्व चयनसहितको जिल्ला अधिवेशन भएका कारण एमालेका नेता कार्यकर्तामा यतिखेर चुनावी सरगर्मी निकै बढेको छ । सुनसरी एमालेमा पनि अधिवेशनबाट नेतृत्व लिन नेताहरूले सक्रियता […] The post एमाले सुनसरी अध्यक्षका लागि द्वारिकलालसहित यी हुन् तीन आकांक्षी appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.
एमाले रुपन्देहीको अध्यक्षका लागि आधा दर्जन नेता आकांक्षी
बुटवल : नेकपा (एमाले)को जिल्ला अधिवेशन नजिकीएसँगै रूपन्देहीमा पार्टी नेतृत्वका लागि नेताहरूको दौडधुपले माहोल तातेको छ। जिल्ला अध्यक्षका लागि आधा दर्जनभन्दा धेरै नेताहरुले आ-आफ्नो दावीसहित आफूनिकटका नेताहरुसँगको भेटघाटलाई तीव्रता दिएका छन्। एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, सचिव छविलाल विश्वकर्मा, स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसाल, नेताहरू खिमलाल भट्टराई, राधा ज्ञवाली लगायतका नेताहरुको…
माओवादी केन्द्र सुदूरपश्चिमको अध्यक्षमा आधा दर्जन बढी आकांक्षी
२६ मंसिर, धनगढी । नेकपा माओवादी केन्द्र सुदूरपश्चिम प्रदेशको अध्यक्षका लागि आधा दर्जन बढी नेताहरू आकांक्षी देखिएका छन् । अहिलेका अध्यक्ष शरदसिंह भण्डारीसहित नरेन्द्र कुँवर, सुदूरपश्चिम प्रदेशका उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री मानबहादुुर धामी, प्रदेशसभा सदस्य वीरमान चौधरी, प्रदेश सचिव नेपबहादुर चौधरी, राष्ट्रियसभा सदस्य हरिप्रसाद चौधरी ‘उत्सव’ र हरि ज्ञवाली ‘अखण्ड’ लगायतका नेता प्रदेश […]
माओवादीलाई पनि अधिवेशनको चटारो– प्रदेश १ को नेतृत्व लिन ३ आकांक्षी
नेकपा माओवादी केन्द्रले सातवटै प्रदेशमा मंसिर २५ गते प्रदेश अधिवेशन गर्दैछ । प्रदेश १ मा तीनजना आकांक्षी देखिएका छन् । सुरेशकुमार राई (हिमाल), प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो (मौसम) र हेमराज भण्डारी अध्यक्षका आकांक्षी देखिएका छन् । पटक–पटक माओवादी फुट्दा समेत साथ दिएका प्रदेश अध्यक्ष समेत रहेका राईले सहमतिका लागि प्रयास गरेको बताएका छन् । उनले अहिले नै उम्मेदवारी घोषणा नगरे पनि बहुमत प्रतिनिधिहरूले उठ्न भन्न थालेको बताएका छन् । उदयपुरबाट संघीय सांसद जितेका राईको ...